Ukucwangciswa kommandla kuchaziwe-iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Ukucwangciswa kwamatyala kuchazwe
Geospatial - GISUkuCwangciswa kweziThili
Ukucwangciswa kwamatyala kuchazwe
UkuCwangciswa koMhlaba sisixhobo sokusetyenziswa okuzinzileyo kwemithombo yendalo. Kwiminyaka emininzi ummandla wasePeru uhlala phantsi
ingqiqo yokwenza ubuninzi bemithombo yobutyebi bendalo, kubangele ukuba kwezinye iimeko zichaphazeleke kwizinto eziphilayo kunye nesiseko esiphucukileyo selizwe, kunye nokuvelisa iinkqubo zokuphuhliswa ngokungalinganiyo. Oku kubangelwa ukungabikho kokubambisana phakathi kwemigaqo yelizwe kunye neyengingqi kunye neziganeko zendawo kunye nokungabikho kombono ohlanganyelweyo wokulinganisa okulinganayo nokuzinzileyo.
Ukuze ugweme ezi meko, kubalulekile ukukhuthaza iindlela ezivumela iimeko eziyimfuneko zokuphuhliswa ngokulinganiselayo kwintsimi.
Siyaqonda intsimi njengendawo equka umhlaba, i-subsoil, i-domain ye-maritime kunye ne-spacepace emoyeni apho ubudlelwane bezoqoqosho, ezoqoqosho, ezopolitiko kunye nenkcubeko zikhula phakathi kwabantu kunye nendalo yendalo.
Spanish GIM International, waqhubeka ngempumelelo
Ukuhlaziywa kweMifanekiso ebonakalayo (Novemba 07)